Sunday, 17 March 2013 15:36	नागरिक
स्मृति ढुंगाना, काठमाडौं, चैत ४ - ब्वाइफ्रेन्डको कुनै कुरा नगर्ने अभिनेत्री दिया मास्के अभिनेता सौगात मल्ललाई प्रेम प्रस्ताव राखिरहेकी छन्। बिहीबार उनीहरु वसन्तपुरस्थित एक होटलको कोठामा भेटिए। 'आइ लभ यु, के तिमी मलाई माया गर्छौ,' दियाले सोधिन्। मौन रहेका सौगात कुनै उत्तर नदिई ढोका खोलेर बाहिर निस्कन्छन्। त्यतिकैमा 'कट् फेरि एकचोटी' कोठाको अर्को भागमा बसिरहेका निर्देशक अनुप बराल गर्जिए। यो दृश्य हाल सुटिङ भइरहेको फिल्म 'फिटकिरी'को हो।
Sunday, 17 March 2013 12:22	नागरिक
काठमाडौं, चैत ४ (नागरिक)- हास्यव्यंग्य सिरियल 'तीतो सत्य'को ५ सय भाग पूरा भएको छ। यही अवसरमा 'तीतो सत्य' युनिटले शनिबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। 'राम बिलाश र धनियाँ' नामक हास्य रेडियो कार्यक्रमबाट सुरु भएको दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको सहकार्यमै सिरियल 'तीतो सत्य' सुरु गरिएको हो।
'बलिउडमा नारी कमजोर'
Sunday, 17 March 2013 12:20	नागरिक
मुम्बई, चैत ४ (एजेन्सी)- बलिउडका फिल्ममा महिला कलाकारले सबैभन्दा कमजोर भूमिका पाउने गरेको भारतीय अभिनेत्री विपाशा बसुले बताएकी छन्। हरर फिल्म 'आत्मा'बाट दर्शकमाझ आउने तयारीमा रहेकी विपाशाले मिड-डेसँग भनिन्, 'विद्या बालानबाहेक कुनै अभिनेत्रीले फिल्मलाई नै धान्ने भूमिका पाएको मलाई थाहा छैन, धेरै फिल्मले सय करोड कमायो होला तर त्यसमा नारी पात्रका लागि छुट्याइएको भूमिकाप्रति भने मलाई चित्त बुझेको छैन।'
डर्टी पिक्चरजस्तो फिल्म खेल्ने रहर छैन : काजोल
Saturday, 16 March 2013 11:15	नागरिक
मुम्बई, चैत ३ (एजेन्सी) - बलिउड प्रवेश गर्न चाहनेहरुका लागि सधै प्रेरणाको स्रोत बन्ने गरी हिरोइन काजोलले कहिल्यै पनि दी डर्टी पिक्चरजस्तो फिल्ममा अभिनय नगर्ने बताएकी छिन्। विद्या बालनले राष्ट्रिय पुरस्कार जितेको फिल्म डर्टी पिक्चरको रोलमा फिल्म पाए के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उनले सोझै इन्कार गरिन्।
शनिबार सिपोराको सिनेमा देखाइने
Friday, 15 March 2013 11:06	नागरिक
सन्तोष पोखरेल,पोखरा, चैत २-पोखरेली भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङ मिस नेपालको दौडमा छिन्, उनले अभिनय गरेको फिल्म 'घलेक दि साइन अफ लभ'को प्रिमियर हुँदैछ। फिल्मको शनिबार पोखरामा विशेष प्रदर्शन गरिन लागेको हो। पोखरामा फिल्म देखाएपछि हङकङ, युके, अमेरिका, कोरिया, बेल्जियम र बहराइनमा प्रदर्शन गरिने निर्देशक कृष्णकुमार गुरुङले जानकारी दिए।
को बन्छ लाहुरे! देशभरिका हलहरूमा
Friday, 15 March 2013 10:22	नागरिक
काठमाडौं, चैत २ (नागरिक)- विभिन्न फिल्म महोत्सवमा अवार्ड जितेको डकुमेन्ट्री 'हु विल बि अ गोर्खा' शुक्रबार सिनेमा हलहरुमा रिलिज हुँदैछ। केसाङ छेतेनद्वारा निर्देशित फिल्म काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नारायणघाट, हेटौंडा, बिर्तामोड र दमकमा प्रदर्शन हुनेछ। फिल्मको नेपाली नाम 'को बन्छ लाहुरे' राखिएको छ।
गोंगजु फिल्मस्को पहलमा रिलिज हुन लागेको यस डकुमेन्ट्रीमा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन पोखराको क्याम्पमा नेपाली युवाहरुले पूरा गरेका प्रक्रिया समेटिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धकालीन दृश्यहरुलाई समेत डकुमेन्ट्रीमा तुलनात्मक रुपमा उनिएको छ।
नेपालमा डकुमेन्ट्री फिल्मको पनि थियटि्रकल रिलिज सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका रुपमा आफू अग्रसर बनेको निर्देशक केसाङ बताउँछन्। डकुमेन्ट्रीले दर्शकलाई सूचनाका साथै प्रशस्त मनोरञ्जन दिने दाबी उनको छ।
बुधबार धरानमा गरिएको च्यारिटी शोमा लाहुरे परिवारका आफन्तहरुले आँसु खसालेको फिल्मका प्रवर्द्धक राजेश गोंगजुले जानकारी दिए। उनी पनि 'हु विल बि अ गोर्खा'लाई एक पूर्ण प्याकेज भएको खुराक मान्छन्। त्यही भएर आफ्नो गोंगजु फिल्मस्ले यसको रिलिजमा सहकार्य गरेको उनले बताए।
आमिरले ४८ नाघे
Friday, 15 March 2013 10:20	नागरिक
मुम्बई, चैत २ (एजेन्सी)- बलिउड सुपरस्टार आमिर खान बिहीबार ४८ वर्ष पूरा गरी ४९ मा प्रवेश गरेका छन्। मिस्टर पर्फेक्सनिस्ट भनेर चिनिने उनले पोहोरजस्तो यसपालि सञ्चारकर्मीसामु आफ्नो घरमा केक काट्ने अवसर भने पाएनन्। उनी अहिले स्विट्जरल्यान्डमा यशराज फिल्मसको 'धूम ३'को सुटिङ गर्दैछन्।
मिस नेपालकी गुरुआमा
Thursday, 14 March 2013 17:49	नागरिक
स्मृति ढुंगाना, काठमाडौं, चैत १ - 'स्टेजमा रहँदा तिमीहरुको आत्मविश्वास अनुहारमा देखिनुपर्छ। सिधा आँखा जुधाएर कुरा गर्नू,' मिस नेपाल सुरु भएदेखि कोरियोग्राफी गर्दै आएकी रचना गुरुङ शर्मा यस वर्षका प्रतियोगीहरुलाई भन्दै थिइन्। प्रतियोगिताको मिति नजिकिँदै गर्दा 'रचना म्याम'को व्यस्तता बढ्दैछ। १९ वर्षदेखि यो प्रतियोगितासँग उनको नाता उस्तै छ।
'डकुमेन्ट्रीले हल र दर्शक पाए फिक्सन किन बनाउनु?'
Wednesday, 13 March 2013 12:00	नागरिक
सन्तोष रिमाल, काठमाडौं, फागुन ३० - 'काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सवमा २०१२'मा डकुमेन्ट्री 'हु विल बी अ गोर्खा'ले निर्देशक केसाङ छेतेनलाई दुबै हातमा अवार्ड दिलाएको थियो। महोत्सवको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिपर्धामा सर्वोत्कृष्ट हुने पहिलो नेपाली डकुमेन्ट्रीको निर्देशक भए केसाङ। दर्शकको मतका आधारमा दिइने 'पब्लिक च्वाइस अवार्ड' पनि उनैको पोल्टामा पर्यो । त्यतिबेला केसाङले भनेका थिए,'मेरो फिल्म यो स्थानको लागि योग्य थियो कि थिएन अर्को कुरा हो। तर, किम्फमा पहिलो पटक सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्रीको निर्देशक हुन पाएकोमा गौरवान्वित छु।'